I-Medical Marijuana neMmeli wamaVets PTSD ePeoria, IL | Thomas Howard
Isimo siphakathi kwezindawo ezingama-31 ezivumela ukusetshenziswa kwe-cannabis kubantu abanezimo zempilo. I-marijuana yezokwelapha nezinto ezisuselwa kuyo manje isisetshenziselwa ukwelapha izimo ezahlukahlukene, njengesifo sikaCrohn kanye ne-glaucoma. Itholakala ngezindlela ezahlukahlukene, njengezimbali ezomile, i-edibles, kanye ne-tinctures.
Ngo-2013, umbusi wezwe wasayina i-Medical Cannabis Pilot Program Act evumela ukuthi kutshalwe, kuthengiswe futhi kusetshenziswe insangu yezokwelapha. Ngaphansi komthetho wase-Illinois, insangu ibhekwa njengesemthethweni kuphela uma ithengwa yisiguli esifanele noma umnakekeli kumthengisi oqinisekisiwe nonelayisense.
Isiguli kufanele sibe nekhadi le-insangu yezokwelapha futhi i-cannabis kumele isetshenziswe kuphela ukwelapha isimo esishiwo ekhadini. Ngaphansi kohlelo, kunemibandela engama-41 engalashwa ngensangu yezokwelapha efana nomdlavuza, i-HIV / AIDS kanye neParkinson's Disease, phakathi kwabanye. Ngo-2016, lolu hlelo lwelulwa kwaze kwaba ngu-2020.
Ingabe unanoma yimuphi umbuzo?
I-Medical Marijuana ne-PTSD ePeoria, e-Illinois.
Kube khona izifundo ezahlukahlukene ngomphumela we-cannabis yezokwelapha ku-PTSD. Olunye ucwaningo olwenziwe eLangone Medical Center lubonise ukuthi i-cannabis yezokwelapha ingasiza ekubuyiseleni ibhalansi ejwayelekile ye-anandamide kubantu abahlushwa i-PTSD. I-Anandamide iyi-endocannabinoid yemvelo. Ibizwa ngegama lesiSanskrit elisho ukuthi "injabulo" noma "injabulo," lo msebenzi usebenza ngokuvuselela uhlelo lwe-endocannabinoid olawula imizwa yenjabulo, yokwesaba nokukhathazeka.
Ngamagama alula, ama-anandamides asebenza njengama-antidepressants wemvelo. Ukukhiqizwa okujwayelekile kwalokhu kwe-endocannabinoid kuqinisekisa ukuthi imizwa yokwesaba, ukukhathazeka, ukudabuka ilawulwa. Amazinga aphansi ama-anandamides angadonsa izimpawu ezitholakala kubantu abaphethwe yi-PTSD,
I-Marijuana Yezokwelapha ye-PSTD Ngaphansi Komthetho wase-Illinois
Ngo-2016, umbuso walelwa yinkantolo Yombuso eCook County ukuthi ingeze i-PTSD ohlwini lwezinkinga ezivunyelwe ukwelashwa insangu yezokwelapha. Lokhu kungemva kokuthi i-Governor Rauner yenqabele izincomo eziningana zesigcawu sochwepheshe sokufaka i-PTSD nezinye izifo kuhlu lwezimo ezingelashwa ngabasebenza nge-cannabis yezokwelapha ngaphansi kohlelo. Ngemuva kwesonto, i-Governor Rauner yasayina i-SB 10 kufaka ne-PTSD njengesimo esifanelekile sokusetshenziswa kwensangu kwezokwelapha. Lokhu kube wusizo ekusizeni amasosha asebathatha umhlalaphansi ukuthi abhekane nama-vets PTSD, ikakhulukazi kulabo abanezimpawu zabo ezingalashwa kalula ngemithi ejwayelekile efana nezidakamizwa zokulwa nokukhathazeka kanye nama-antidepressant.
Ama-Vates aphethwe yi-PTSD ayelulekwa ukuthi ahlole ukuhlolisiswa kwe-PTSD njengenye yezidingo zokuthola ikhadi le-insangu yezokwelapha. Kulabo abanamakhadi akhona, isimo singangezelelwa kuhlu lezimo elisetshenziselwa ikhadi. Kunemitholampilo ehlukahlukene esiza abasebenza ngamaveji ukufaka isicelo sekhadi le-marijuana yezokwelapha ngezimo zabo zempilo. Ama-Vets adinga ukunakekela ukugwema noma yiziphi izingqinamba ezingase ziphakame ne-VA ezingayemukeli insangu njengokwelashwa kwe-PTSD.
I-Illinois ibeka imithetho eqinile ekusetshenzisweni okusemthethweni kwensangu yezokwelapha. Ngakho-ke kubalulekile ukuthola ukuthi kugunyazwe futhi kuvunyelwe i-PTSD nokusetshenziswa kwe-cannabis ngaphambi kokuba iziguli zama-vets ziqale ukusebenzisa insangu yezokwelapha ngesimo sayo. Imvamisa odokotela abasezikhungweni ezinkulu zezokwelapha abayincomi insangu yezokwelapha, okusho ukuthi abezempilo kumele babheke kodokotela abanomkhuba wabo, futhi bavame ukuncika emthini wokuhlanganisa, noma bacele indawo yakho yendawo ukuthi idluliselwe.
Thola ukuxhumana nathi
Nakuba Imithetho yase-Illinois isasibeka icala ngokutholakala nensangu yokuzijabulisa, umbuso uyakuvumela ukuba nokuba nokusetshenziswa kwensangu yezokwelapha kulabo abaphethe ikhadi lensangu yezokwelapha. Abanakekeli abavunyelwe ukuhlakulela lesi sitshalo ukuze sisetshenziselwe ukwelashwa. Yonke insangu yezokwelapha e-Illinois itshalwa ezindlini ezikhungweni zokutshala eziningana ezisatshalaliswa phezu kombuso.